Yaa ka dambeeya soo celinta xiriirka Soomaaliya iyo Kenya? | KEYDMEDIA ONLINE
Yaa ka dambeeya soo celinta xiriirka Soomaaliya iyo Kenya?
Maamulka Farmaajo ayaa December 2020 jaray xiririka Kenya, isagoo xiligaasi ku eedeeyay faragelin joogto ah arrimaha gudaha dalka Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday Maanta oo Khamiis ah inay dib usoo celisay xiriirkii kala dhaxeeyay Kenya, maalmo kadib markii Farmaajo uu xukunka ku wareejiyay Rooble.
Qoraal kasoo baxay Wasaaradda Warfaafinta ayaa lagu sheegay in iyadoo la eegayo deris wanaaga iyo xiriirka soo jireenka ah, ay dowladda Soomaaliya go'aan ku gaartay inay caadi ka dhigto cilaaqaadka Kenya.
Soo celinta xiriirka labada dal waxaa kasoo shaqeysay dowladda Qatar oo Mutlaq Al-Qahtani usoo dirtay Soomaaliya todobaadkan kaasoo kulamo la yeeshay Farmaajo, Rooble, Fahad Yaasiin iyo mucaaradka.
War-Saxaafadeedka ayaa looga mahadceliyay amiirka Qatar kaalintii uu ka qaatay soo celinta xiriirka Kenya iyo Soomaaliya oo kusoo beegantay xili Muqdisho ka socdaan isbedello siyaasadeed oo Rooble hogaaminayo.
Kenya wali kama aysan hadlin go'aanka Muqdisho kasoo baxay, laakiin waxay kusoo beegmaysaa saacado kadib markii Uhuru la kulmay wafdi ka socda Qatar, kasoo fariin ka timid Sheekh Tamim Bin Xamad Al-Thani gaarsiiyay.